Lumanu: Tsvaga Vanokanganisa uye Tsvaga Anogonesa Zvemukati | Martech Zone
Kuwedzera kusvikwa kwezvako zvemukati kwakakosha. Kunyangwe iwe uri kuyedza kukura yako organic renji nekuita kuti zvako zvemukati zviongororwe uye zvakabatana neane masimba-masimba masayiti, ungave uri kuyedza kuwedzera yako yemagariro kusvika kune akakodzera vateereri, kana kana iwe uri kuyedza kuvaka chiremera mune yako indasitiri nekuwana kutaurwa kubva kune mumwe munhu ane simba ... kushambadzira kushambadzira kunofanirwa.
Kufuridzira kushambadzira kwakaputswa kuita zvikamu zviviri zvakakosha
Ndivanaani inopisa iyo inokwanisa kuwana huru, inobatanidzwa vateereri yauri kuyedza kuwana pamberi payo?
Ndeupi wakasarudzika uye neruzivo gutsikana izvo zvinokwezva kutariswa kwevanokurudzira?
Maitiro akanakisa ekushandisa vanokurudzira zviitiko zvakasiyana
Iko kukosha kweanosimudzira kwakafanana neiyo media yekuparadzira zano. Vanosimudzira vakasiyana vanozove vakanakira kushambadzira kwakasiyana uye zvinangwa zvebhizinesi. Pazasi pane zvinangwa zvishoma zvatakasangana nazvo uye mamwe maitiro akanakisa ekushandisa vanokurudzira vakanaka
Public Relations - ipfupi yekuhaya inodhura PR agency, uchishandisa Lumanu kutsvaga vatori venhau uye mabloggi ayo anoshanda mukukurukura nhau dzenyaya yako chaiyo yakakosha pakufambisa traffic pamatanho akakosha (semuenzaniso, chigadzirwa chitsva, ficha yemari, nezvimwewo). Nekutsanangura vangangove vatapi venhau uye kubata nzira yekuwana mukana, kambani inozokwanisa kupinza hukama ihwohwo maringe nekuhusiira kukambani yePR. Izvi zvichave zvakakosha mukufamba kwenguva sezvo vachizonyanya kunyora nezvekuwedzera maficha / zviziviso
Chigadzirwa uye Feature Mhinduro - Vafuridzi inyanzvi uye vanovimbwa nevateereri vavo, nekunzwisisa kwakadzama kwenzvimbo yavanofukidza. Ivo vanoita akanakisa ekuridza mabhodhi ezvigadzirwa zvitsva, maficha, kana kunyangwe shanduko-mune-nzira dzezviripo zvigadzirwa. Isu takaona makuru mabhurani achishandisa vanokurudzira kana uchinzwisisa zvayakanakira nezvayakaipira zvekupinda munzvimbo nyowani. Vanokurudzira vanowanzo shinga kana vakapihwa mukana wekupa mhinduro pane chigadzirwa chitsva kana kupa.
Content Creation - Kugovera chinogonesa kugadzira zvemukati zvechiratidzo chako kune imwezve bhenefiti yekuve yakavakirwa muvateereri iyo inokurudzira inogona kusimudzira zvirimo kuburikidza. Kunyangwe iri dzidziso yezvigadzirwa kana ongororo yemakwikwi, kukurudzira vanogadzira zvigadzirwa zvemukati kunovimbisa zvemukati zvichave zvemhando yepamusoro uye zvinoonekwa nevanhu chaivo. Icho hunyengeri ndechekutsvaga kwete chete akakosha anonyanya kukurudzira, asi zvakare uyo ane nhoroondo yekugadzira mhando dzeanoshanda kwazvo zvemukati zvauri kutsvaga kugadzira
Brand Mentions - Nekuve pane inokanganisa radar, mucherechedzo unogona kuwedzera mugove wavo wezwi. Isu takaona nzira yakanakisa yekuvaka kuvimbika kweiyo brand yako uye kuichengetedza ndeye kugara uchigara pamberi pevateereri vako. Izvo hazvina basa kana vateereri vazere neCTOs kana amai vako vekugara-kumba, maratidziro ezvinoratidzwa. Vafuridzi zvakasikwa vanoda kugadzira zvemukati zvemukati, uye kana iwe uchigona kuvabatsira kuburikidza neinonakidza dhata kana ruzivo rwekuverenga - zvinokubatsira iwe kuenda pamberi pevanhu vazhinji.
Lumanu ndiyo yekutanga uye chete chikuva chekuvaka yakasarudzika inosimudzira uye zvemukati mairafu emumwe mushandisi, kune imwe neimwe nhaurwa. Izvi zvinoreva mhedzisiro-inoenderana nemhedzisiro inozoita zvirinani nekufamba kwenguva. Chinangwa chavo ndechekutora chiratidzo chekiseti yemazwi akakosha uye vagadzire vanhu vakanakisa padhijitari nemagariro, uye voita kuti kusvikira & kuvaka chivakwa kuve kusagadzikana sezvinobvira
Lumanu inovaka inopesvedzera girafu chaiyo-nguva zvichibva pane yakapihwa musoro wenyaya. Zvichibva pane yedu yemukati centric maitiro, iwe unovimbiswa runyorwa rwevanokurudzira vanogadzirirwa kumusoro wenyaya wako - izvo zvinova zvirinani uye zvakanyanya kudzika nekufamba kwenguva.
Vanokanganisa, data rezvemagariro uye rekuita, pamwe nezvinyorwa zvavo zvakakosha zvinongobaya chete. Iyo chikuva chakavakwa neakanakisa-tsika musimboti yekutarisa Influencer sehuwandu hwazvo zvemukati + metric, kwete yavo chete Twitter bio. Izvi zvinobvumidza kufambiswa kwakasarudzika kwakaratidzwa kuve kwakapeta zvakapetwa pane kutonhora kunosvika.
Mamiriro ehunyanzvi echimiro mutauro ekugadzirisa (NLP) algorithms anoburitsa madingindira kubva kune akakurumbira zvemukati wenyaya yako kuti upe pfungwa yezviri kuitwa nevanhu. CPC uye yekukwikwidza dhata dhata inopa chiratidzo chekukosha kweiyo traffic (yakakwira CPC & Ad makwikwi zvinoreva vanopesvedzera munzvimbo iyoyo vanonyanya kukosha nekuti vateereri vanofarira madingindira aya vatengi vakakosha).
Makambani eese saizi anobatsirwa zvakanyanya kubva kwete chete ekuzivisa avo vanonyanya kufadza asiwo kuita mune inogara ichienderera kuburitsa chaiyo bhizinesi mhedzisiro.
Edza Lumanu mahara
Tags: zvakasikwa zvemukaticuratecurate zvemukatitsvaga zvirimotsvaga vanokurudzirasimbakukanganisa kushambadzirakufurira kuwanikwainfluencer grafuhukama hwevanhu